Ixesha Post: Aug-02-2021
Ndivile ukuba umntu osuka kwiYunivesithi yaseTaiwan usinike amanzi ashushu asemthonjeni… ”Kutshanje, izixhobo zokumba amanzi kakuhle eXCMG ziye zagrumba amanzi ashushu aphantsi komhlaba ashushu kwilokishi yaseXinquan, eJiangxi. Ngokuqinisekileyo! Amanzi asentwasahlobo ashushu anikwa ubume be "aristocrat emanzini" ngenxa yayo ...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha Post: May-10-2021
I-1,000th XCMG ethe tyaba yomkhombandlela wokugumba uqengqele umgca wendibano kwi-2019 kunye nomsitho wokuphehlelelwa ngobuninzi beetoni ezinkulu zokuloba iitoni ezinkulu
Umsitho wokuphehlelelwa kwe-1,000th XCMG ethe tyaba yomkhombe wokugoba ngo-2019 kunye nokuqaliswa kobunzima beetoni ezinkulu zokugaya izixhobo ezithe tyaba zibanjelwe eXCMG Foundation! Kwintsimi yoomatshini abangenanto, ishiye istrowuku esomeleleyo nesimibalabala! Iminyaka elishumi yokusebenza nzima ...Funda ngokugqithisileyo »
I-XCMG, yaphinda yatyhila irenki!
Kutshanje, "izithuba zamagorha" eziwela isangqa ziye zathandwaNoko ke, ngenxa yobude bayo kunye nobunzima bokwakha, uninzi lwabadlali abaphambili beTrenchless bahlala kude Sebenzisa amandla "njengelitye lokunyathela" "Ilitye lokunyathela" lale projekthi ye-mega yile. ..Funda ngokugqithisileyo »
I-XCMG XZ3600 ethe tyaba yomkhombe wokugrumba isixhobo sokuphinda ibuye ibe "yingcali" ekuweleni ngaphantsi komhlaba
Emva kokuwela i-135MPa ye-geology enzima kakhulu, i-XCMG XZ3600 ethe tyaba yomgaqo wokugrumba, ojolise kakhulu "kumathambo alukhuni", uye waphinda waba "yingcali" ekuweleni ngaphantsi komhlaba Kutshanje, imodeli eqhumayo enkulu XZ3600 yeXCMG ethe tyaba d. ..Funda ngokugqithisileyo »
Umatshini weDth Rig, imfumba yokomba isixhobo, Umatshini wokugoba amanzi amancinci, Umatshini wokugrumba amaqula,